Puntland oo sheegtay in Australia ay ka qeyb qaadaneyso Horumarinta Mashaariicda DPL – SBC
Puntland oo sheegtay in Australia ay ka qeyb qaadaneyso Horumarinta Mashaariicda DPL
Kulan saxaafadeed Maanta ay ku qabteen gudaha magaalada Garoowe xarunta Puntland Madaxweynaha Puntland iyo Safiirka Soomaaliya u qaabilsan Dalka Australia ayaa lagu sheegay in Australia ay daneyneyso ka qeyb qaadashada Horumarka iyo wada shaqeynta Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horeyn saxaafada la hadlay kulanka saxaafadeed isagoona sheegay in ay soo dhaweynayaan Safiir Geof Tooth oo ka socda Dalka Australia kuna faraxsan yihiin imaanshihiisa dalka .
Waxaa kale oo uu Dr Faroole tibaaxay in ujeedka Safarkiisa Mr Tooth aheyd sidii loo sii horumarinlahaa xiriirka Puntland iyo Australia ayna Australia doonitaankeedu yahay ka qeyb qaadashada xaaladaha gobolka, horumarka iyo weliba dhinacyo kale oo badan
Safiirka Australia ee Soomaaliya ayaa isna dhankiida ka mahad celiyay soo dhaweynta Madaxda iyo shacabka Puntland ay u sameeyeen ayna ka raali gelinayaan isaga iyo dalkiisaba mudada dheer ee aanay booqashada ku imanin deegaanada Puntland.
“waxan rumeysannahay in Australia ay dhinacyo badan oo horumarineed oo ay u baahantahay Dolada Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay ka qeyb qaadan karto, maadaama ay Puntland tahay tan keliya ee ugu xooga badan dadka ka soo jeeda ee kudhaqan Australia” waxaa hadaladaasi uu ka mid ahaa kuwii Safiirka Australia ee Puntland uu ka sheegay shirka Jaraaid.
ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay maanta ka amba baxayaan Puntland balse sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo laaban doono, iyadoo diyaaradii qaadeysayna ay durhurnimadii isla maanta ka duushay garoonka diyaaradaha Ee Garoowe.